Started this discussion. Last reply by infofreakz Apr 19, 2013. ျမန္မာမ်ား ေရးသားေသာ App မ်ားကို crack လုပ္ေနေသာ Myanmar Mobile App Store
Started this discussion. Last reply by pyiphyomgmgsoe Jan 22, 2013. ဂိမ်းရေးနည်း သင်တန်းဖွင့်မည်!
Ag Myo Thant liked Myint Kyaw Thu's blog post End User များအတွက် Myanmar UnicodeDec 6, 2013misaki liked Myint Kyaw Thu's blog post Making of Santa Talking Part-1Sep 8, 2013infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"ငါ့ဘက်ကတော့ ရှင်းစရာရှိတာ ရှင်းပြီးသွားပြီအခုကစပြီး ဘာမှ ပြန်ပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကုန်တယ်"Apr 19, 2013infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"မင်းက လေနဲ့ဝမ်းတောင် ကွဲပြားအောင် နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူပဲ။ ငါရေးထားတာက vulnerability ကိုရှာတယ်လို့ရေးထားတာ။ ကူလီကူမာတွေ လျှော့ပါကွာ။ မင်းမလည်း အဲဒီလို အာချောင်တာတွေကြောင့် လူမုန်းများလှပြီ။"Apr 19, 2013Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"ဒါ​ပေါ့။​ ခင်​ဗျား​ လိမ်​မ​လိမ်၊​ ဖောက်​မ​ဖောက်​က​တော့​ ကိုယ်​တိုင်​ အ​သိ​ဆုံး​ဖြစ်​မှာ​ပါ။​ ခင်​ဗျား​တို့​ကြောင့်​ hacker တွေ​ သိက္ခာ​ကျ​တယ်။​ ပတ်​ရမ်း​တာ​လဲ​ မ​ဟုတ်​ဘူး။​ ခင်​ဗျား​ post ထဲ​မှာ​ V3SS နဲ့​ အ​ပေါင်း​အ​ပါ​တ​စု​ ဖောက်​တယ်​လို့​…"Apr 19, 2013infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"အဲဒါကတော့ မင်းသမိုင်းပဲတစ်ခုတော့ရှိတယ် မျက်နှာမော့ပြီး တံတွေးထွေးနေသ၍ကတော့ အဲဒီတံတွေးဟာ မင်းမျက်နှာပေါ်ပဲ ပြန်ကျနေဦးမှာပဲပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် မင်းနဲ့ အဖက်လုပ်ပြီး ရန်မဖြစ်ချင်လို့ မင်းကိုတောင် block လုပ်ထားတာဒီနေ့မှ ဒီ post မှာ…"Apr 19, 2013Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"ပြောင်​လိမ်​ :S တော်​ပြီ​ လိမ်​တဲ့​သူ​နဲ့​ ဆက်​ပြီး​ အ​ငြင်း​မ​ပွား​ချင်​တော့​ဘူး​။ သူ​လဲ​ လိမ်​ရ​လွန်း​လို့​ အ​ကု​သိုလ်​များ​တယ်။​ :S"Apr 19, 2013infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"ငါရေးထားတဲ့ note မှာ screenshot ကအစ အပြည့်အစုံပါတယ်နောက်ပြီး ငါပြောထားပြီးသား vulnerability ကိုရှာတာပဲရှိတယ် ဘာမှ exploit မလုပ်ခဲ့ဘူး အဲဒီ information ကိုလည်း leak မလုပ်ခဲ့ဘူးဘူးမင်းဘာသာမင်း ဖောက်ခံထိတာကတော့ ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းသာ ရိုးသားဖို့လိုတယ်"Apr 19, 2013Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"Site ဖောက်​ပြီး​ အ​ဖျက်​ခံ​ရ​တာ​ MITPro က​ လူ​တော်​တော်​များ​များ​ သိ​တယ်။​ ခု​မှ​ လာ​လိမ်​မ​နေ​နဲ့။​ အ​ခြား​ဘယ်​သူ​မှ​လဲ​ မ​ဖောက်​ဘူး။​ ကျွန်​တော်​ကိုယ်​တိုင်​ ဘယ်​သူ​ ဖောက်​မှန်း​ကို​မ​သိ​ဘူး။​ ခင်​ဗျား​ဘဲ​ ဖောက်​တယ်​လို့​ FB မှာ​ပြော​လို့​…"Apr 19, 2013infofreakz replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker""အဲ​လို​ မ​ပြော​စေ​ချင်​ရင်​ သူ​များ​ site ကို​မ​ဖောက်​နဲ့​ပေါ့​ဗျာ။​ ဒါ​သူ​များ​ စီး​ပွား​ရေး​ လုပ်​နေ​တာ​ပါ။​ အ​ပျော်​တင်​ထား​တာ​လဲ​ မ​ဟုတ်​ဘူး။​ online မှာ​ငြင်း​လို့​ ရှုံး​တာ​နဲ့​ အဲ​လို​ အောက်​တန်း​ကျ​ကျ​ သူ​များ​ site ကို​ ဖောက်​စ​ရာ​…"Apr 19, 2013Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"photo editing က​ စာ​အုပ်​ထုတ်​တဲ့​သူ​လုပ်​တာ။​ ဘယ်​စာ​ရေး​ဆ​ရာ​က​ လုပ်​လို့​တုန်း။​ ဗ​ဟု​သု​တ​နှယ်​ ကြွယ်​ဝ​ပါ့။​ :S ကျုပ်​ဆီ​မှာ​ ခိုး​ထား​တာ​ မ​ရှိ​ရင်​ ခင်​ဗျား​ ဒူး​ထောက်​ တောင်း​ပန်​မ​လား​?"Apr 19, 2013Myint Kyaw Thu replied to Myint Kyaw Thu's discussion To V3SS or Arkar or မုဆိုးမအိမ္ ထမိန္႐ုတ္ hacker"photo editing က​ စာ​အုပ်​ထုတ်​တဲ့​သူ​လုပ်​တာ။​ ဘယ်​စာ​ရေး​ဆ​ရာ​က​ လုပ်​လို့​တုန်း။​ ဗ​ဟု​သု​တ​နှယ်​ ကြွယ်​ဝ​ပါ့။​ :S ကျုပ်​ဆီ​မှာ​ ခိုး​ထား​တာ​ ရှိ​ရင်​ ခင်​ဗျား​ ဒူး​ထောက်​ တောင်း​ပန်​မ​လား​?"Apr 19, 2013 More... RSS